Tsiroanomandidy Telo mianaka nofiraina famaky sy notifirina
Olona telo niara-naratra mafy. Ny roa voakapa famaky ary ny iray voatifitra. Io no vokatry ny fanafihan-jiolahy tao Tsiroanomandidy renivohitry ny Faritra Bongolava. Marihina anefa fa tsy nisy entana sy fananana very.
Azo heverina fa disadisam-piarahamonina izao fandratrana goavana izao. Raha iverenana ny zava-nitranga, ny alatsinainy tamin’ny 2ora maraina teo, jiolahy efadahy mitam-piadiana no nanafika mpivarotra kafe sy mofo teo Amboasarikely, eo an-tampon-tanànan’ny kaominina Tsiroanomandidy. Basy iray vita gasy no nitifiran’ny olon-dratsy ny tanana sy molotra raim-pianakaviana 30 taona. Famaky be iray kosa no nikapan’ireo dahalo ny lohan’ny raim-pianakaviana iray, zokiolona efa mananika ny 60 taona sy ny tanana ana tovolahy iray vao erotrerony 20 taona. Araka ny vaovao ofisialin’ny zandary eo Ankadilalana, tsy nisy nipika ny entana fa vao avy nandratra ireo malaso dia nitsoaka niantsinanana. Efa nentina ao amin’ny hopitalin’ny Faritra Bongolava ireo naratra. Ny mpitandro filaminana any an-toerana no mandray an-tanana ny raharaha.